Avereno indray ny mailaka voafafa ao amin'ny Outlook - DataNumen
Home Products DataNumen Outlook Repair Avereno indray ny mailaka voafafa ao amin'ny Outlook
Avereno indray ny mailaka voafafa ao amin'ny Outlook
Fafao tsy nahy ny mailaka?
Nesorinao tsy ho ela ve ny fampirimana ireo entana voafafa?
Lost mailaka tsy azo averina?
Hadisoana hafahafa ao amin'ny fisie PST?
Lost ny teny miafina momba ny fisieo PST?
Olana amin'ny fanarenana mailaka any Outlook?
DataNumen Outlook Repair manamboatra mora foana an'izany rehetra izany sy maro hafa.
Ny fahazoana mailaka voafafa matetika avy any Outlook dia tsotra. Rehefa tsindrio ny bokotra hamafana dia apetraka ao anaty fampirimana voafafa ilay mailaka. Ny fandehanana any amin'ny fampirimana dia mamela ny mailaka hovakiana feno, ary azo afindra mora amina fampirimana hafa.
Raha toa kosa, ny folder voafafa dia voafafa, na raha voafafa tamina Ctrl-Delete (izay antsoin'i Microsoft ho voafafa mafy) ilay mailaka dia nesorina tsy ho ela tao amin'ny Outlook ilay mailaka. Ny fanarenana mailaka an'i Outlook avy eo dia nanjary sarotra kokoa.
Araka ny fanohanan'ny Microsoft, “… raha tsy afindranao amin'ny fampirimana ireo entana voafafa alohan'ny hamafana azy ireo dia voafafa mafy ireo singa ireo ary tsy azonao atao ny mamerina azy ireo avy amin'ny fampirimana ireo entana voafafa.”
Ny fomba tokana hanafoanana ny mailaka toy izany dia ny fampiasana DataNumen Outlook Repair - fanaovana asa haingana sy tsotra hamahana ny olana.
Miasa amin'ny Outlook 97, 98, 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 ary 2019.
Manarena tanteraka ireo hafatra mailaka Outlook, lahatahiry, posts, fanendrena, fangatahana fihaonana, fifandraisana, lisitra fizarana, asa, memo, diary, naoty ary maro hafa.
Afaka manafoana ny mailaka rehetra ao amin'ny Outlook - na lahatsoratra tsotra, endrika RTF na HTML.
Ireo rakitry ny mailaka Outlook dia averina feno.
Tafaverina feno ireo zavatra voafono.
Fanohanana ireo rakitra PST mihoatra ny 2 GB ny habeny ary zaraina ireo rakitra PST raha ilaina izany.
Fanohanana amin'ny famoronana rakitra PST amin'ny endrika Outlook 97-2002 sy Outlook 2003-2010.
Manohana ny fanamboarana batch.
Tsy mila fahalalana ara-teknika.